"Ah!!! Waxan Nacay Idaacadda Iyo Tvga Qaranka Ee Somaliland, Waar Ma Waxay Garan Waayeen..." Mujaahid Cali Guray
Wednesday June 27, 2018 - 13:57:00 in Wararka by Abdi A.
Hargeysa-(Caalami-News)-Ah! waxan nacay Idaacadda iyo TVga Qaranka ee Somaliland. Waa waxa intaa ay jireen aan si hagar la'aan ah dadka uga haqab tirin xusuusta taariikhdii 60kii. Iska daa wax kale eh caawa oo kale ma waxay garan waayeen Xamar h
Hargeysa-(Caalami-News)-Ah! waxan nacay Idaacadda iyo TVga Qaranka ee Somaliland. Waa waxa intaa ay jireen aan si hagar la'aan ah dadka uga haqab tirin xusuusta taariikhdii 60kii. Iska daa wax kale eh caawa oo kale ma waxay garan waayeen Xamar heesihii Walaalo Hargeysa hadii ay badh ku dabaaldegeen idinkuna dhinaca kale dadkiina wax ka tusa oo barnaamijyo taxane ah ka diyaariya.
Waar ma waxay garan waayeen wax kaleba iska daayoo heestii Xuseen Aw Faarax ee (Allow sahal amuuraha adaa noo aqoonee) Tvga iyo Idaacadaba ka saara.
Dadka Somaliland maxaa loogu bedelay kalgacalkii iyo wanaagii iyo jacaylkii ay u qabeen midnimo soomaaliyeed ee wax walba ay u hureen. Saw inta lala yaabay dad aan waxba doonayn inta laga soo qaaday SOOMAALI QALDAAN lama odhan. Abaalka iyo wanaaga loo galo dar aan geyin baa sidaas ah. Ilaa maanta ayaanay xumaan mooyee wanaag waxba ku lahayn oo caqligoodu yahay kaalay sidii hore ayaa fiicnayde.